ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ပါ - ဘုရားသခင်ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံများ > ဘုရားသခင်၌ Vetrauen
ကယ်တင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်လုံးလုံးမှီခိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခရစ်တော်ပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုသူ့ထံမှဖုံးကွယ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်ပြုမိသည့်တိုင်ဘုရားသခင်အားမကြောက်ပါ။ ငါတို့ကိုချစ်ခြင်း၊ ငါတို့အနားမှာရပ်နေပြီးငါတို့အပြစ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့လမ်းတစ်လျှောက်မှာဘယ်တော့မှကူညီမစလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုသူကြောက်ရွံ့မယ့်အစားကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူဖြစ်လိုသောသူအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုအပ်နှံနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သောအခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ၏အမြင့်ဆုံး ဦး စားပေး၊ အကြောင်းရင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိကြသည်။ အေသင်ရှိအတွေးအခေါ်ပညာရှင်များအားပေါလုပြောကြားခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်ရှင်နေထိုင်၊ ယက်ယွင်းခြင်းနှင့်ဘုရားသခင်၌ရှိကြသည်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ ငွေများ၊ အချိန်၊ ဂုဏ်သတင်းနှင့်ဤအဆုံးသတ်ဘဝထက်ပင်အဖိုးတန်သည့်အရာများထက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုသိပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုသူနှစ်သက်ကြောင်းယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောဘဝအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်မဟုတ်ဘဲချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ဝတ်ပြုလိုကြသည် - ဒေါသအရှိန်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲလွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြောင့်ပျော်ရွှင်စွာအမှုဆောင်ခြင်း။ ကျနော်တို့ကသူ့တရားစီရင်ခြင်းကိုယုံကြည်တယ်။ ကိုယ်တော့်စကားတော်နှင့်နည်းလမ်းတော်များကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်နှလုံးအသစ်များပေးဖို့၊ သူနှင့် ပို၍ တူအောင်လုပ်ရန်၊ သူချစ်သောသူကိုချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့်သူတန်ဖိုးထားသောအရာများကိုတန်ဖိုးထားရန်သူ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်။ သူကငါတို့ကိုအမြဲချစ်ပြီးဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးဆိုတာကိုသူယုံကြည်တယ်။
တနည်းကား, ငါတို့ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ဤအမှုကိုမဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌၎င်းကိုသခင်ယေရှုပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ရည်ရွယ်ချက်အားဖြင့်သူ၏ချစ်မြတ်နိုးရသောသားသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ယေရှု၏အဖိုးထိုက်သောအသွေးတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရသည်။
Der Apostel Petrus schrieb: «Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen» (1. ဓာတ်ဆီ 1,18-20) ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိကိုသာမကကျွန်ုပ်တို့၏အတိတ်နှင့်အနာဂတ်ကိုလည်းဘုရားသခင်အားအပ်နှင်းနိုင်သည်။ ယေရှုခရစ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝအားလုံးကိုရွေးနုတ်သည်။ ရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်ရဲရင့်သောကလေးငယ်တစ် ဦး နည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာ၌လုံခြုံစွာအနားယူနိုင်ပါသည်။